ဘာမှမဟုတျပဲနဲ့ နာကငျြနတေတျတဲ့လူတဈယောကျရဲ့ရငျထဲကို ဝငျကွညျ့ပေးပါ - ONE DAILY MEDIA
အဲ့ဒီ ဘာမှမဟုတျပါဘူးဆိုတဲ့အရာတှနေဲ့ ကွကှေဲနရေလောကျတဲ့ထိကို အမြားကွီးမြှျောလငျ့ထားတာကို သိရလိမျ့မယျ . တခြို့က ကိုယျ့ကို ဂရုပဲမစိုကျတာလား ဒါမှမဟုတျ ဂရုပဲမစိုကျခငျြခဲ့တာလား မသဲကှဲဘူး
ကိုယျနာကငျြနပေါပွီလို့ပွောတဲ့စကားတှဟော ဟာသတှေ ဖွဈသှားခဲ့ဖူးတယျ ။ ကိုယျအတညျပေါကျကွီး ပွောနတေဲ့စကားလုံးတှကေိုလဲ လှောငျရယျခံရဖူးတယျ ။ အဲ့ဒီနရေ့ကျတှမှော နဂါးခေါငျး ဘယျဖကျပဲလှညျ့လှညျ့ ကိုယျ့အတှကျတော့ ပွသဒါးပါ ။
နားလညျပေးလောကျမယျထငျလို့ပွောလိုကျတဲ့စကားလုံးတှတေျောတျောမြားမြားက သူ့အတှကျ စိတျရှုပျစရာပေါ့ သတိတရနဲ့ဆကျတဲ့ဖုနျးတှေ ကိုငျလိုကျတဲ့အခြိနျ ပထမဆုံးပွောထှကျတဲ့စကားက ဘာပွောစရာရှိလို့လဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှကွေားမှာ နှုတျဆိတျနခေဲ့ဖူးတယျ ပွောစရာတှေ မရှိခဲ့တော့တာမဟုတျပဲ ကိုယျပွောမယျ့စကားကို သူ အလေးမထားပါလားဆိုတဲ့အတှေးကွောငျ့ ဝဲသှားတဲ့မကျြရညျတှကေို သုတျဖို့အခြိနျပေးလိုကျရုံပါ …
ဘာမဟုတျတာလေးနဲ့တဲ့ … အဲ့ဒီဘာမဟုတျတာလေးနဲ့တောငျ ဒီလောကျထိဖွဈပကျြနတေဲ့အထိ ခဈြခဲ့မိလို့ပါ …ဆငျတဈကောငျအတှကျနှာခရြေုံဆိုပမေယျ့ ပုရှကျဆိတျတဈကောငျအတှကျတော့ မုနျတိုငျးပေါ့ … အလေးအနကျမထားတတျတဲ့လူအတှကျ ဘာမှမဟုတျပါဘူးဆိုပမေယျ့ အရာရာကို အလေးအနကျထားခဲ့မိတဲ့ကိုယျ့အတှကျတော့ နာကငျြစရာပေါ့ …
ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ နာကျင်နေတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ထဲကို ဝင်ကြည့်ပေးပါ အဲ့ဒီ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ ကြေကွဲနေရလောက်တဲ့ထိကို အများကြီးမျှော်လင့်ထားတာကို သိရလိမ့်မယ် . တချို့က ကိုယ့်ကို ဂရုပဲမစိုက်တာလား ဒါမှမဟုတ် ဂရုပဲမစိုက်ချင်ခဲ့တာလား မသဲကွဲဘူး
ကိုယ်နာကျင်နေပါပြီလို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာ ဟာသတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ဖူးတယ် ။ ကိုယ်အတည်ပေါက်ကြီး ပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေကိုလဲ လှောင်ရယ်ခံရဖူးတယ် ။ အဲ့ဒီနေ့ရက်တွေမှာ နဂါးခေါင်း ဘယ်ဖက်ပဲလှည့်လှည့် ကိုယ့်အတွက်တော့ ပြသဒါးပါ ။
နားလည်ပေးလောက်မယ်ထင်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေတော်တော်များများက သူ့အတွက် စိတ်ရှုပ်စရာပေါ့ သတိတရနဲ့ဆက်တဲ့ဖုန်းတွေ ကိုင်လိုက်တဲ့အချိန် ပထမဆုံးပြောထွက်တဲ့စကားက ဘာပြောစရာရှိလို့လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကြားမှာ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ဖူးတယ် ပြောစရာတွေ မရှိခဲ့တော့တာမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ပြောမယ့်စကားကို သူ အလေးမထားပါလားဆိုတဲ့အတွေးကြောင့် ဝဲသွားတဲ့မျက်ရည်တွေကို သုတ်ဖို့အချိန်ပေးလိုက်ရုံပါ …
ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့တဲ့ … အဲ့ဒီဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့တောင် ဒီလောက်ထိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အထိ ချစ်ခဲ့မိလို့ပါ …ဆင်တစ်ကောင်အတွက်နှာချေရုံဆိုပေမယ့် ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်အတွက်တော့ မုန်တိုင်းပေါ့ … အလေးအနက်မထားတတ်တဲ့လူအတွက် ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပေမယ့် အရာရာကို အလေးအနက်ထားခဲ့မိတဲ့ကိုယ့်အတွက်တော့ နာကျင်စရာပေါ့ …